RUUSHKU MIYUU HUBAYNAYAA TALIBAN? | Maalmahanews
Arrintani ayaa ku soo beegmaysa xilli dadka arrimahani u kuur gala ay u muuqato “dagaal qabow oo cusub “.
Waxa uu sidoo kale ku eedeeyay Ruushka in ay buunbuuninayaan tirada dagalyahanada (IS) ee ku sugan Afqanistan “si ay u sharciyeeyaan tillaabooyiinka Taliban ayna taageero u siiyaan”.
“Waxa aan haynaa hub la keenay xaruntan taasi oo ay noo soo gacan galiyeen hogaamiyayaasha Afqanistan, waxa ayna noo sheegeen in Ruushka uu siiyay Taliban,” ayuu yiri Gen John Nicholson.
Bishii December 2016 Gen Nicholson waxa uu Ruushka iyo Iiran ku eedeeyeen “in ay sharciyaynayan kooxda”.
Image captionGeneral John Nicholson waxa uu Iiraan iyo Ruushka ku eedeeyay “in ay sharciyaynayaan Talaiban “
Bishii May 2017 agaasimaha sirdoonka gaaashaandhiga Mareykanka Janaraal Vincent R Stewart ayaa u sheegay guddi ka tirsan Sanetka “ma arkin cadeymo la taaban karo oo muujinaya hub iyo lacago la diray.”
Xoghayaha gaashaandhiga Mareykanka James Mattis ayaa bishii October 2017 u sheegay guddiga adeega hubka ee aqalka Sanetka in uu doonayo in uu arko caddeymo dheeraad ah oo muujinaya heerka ay garsiisan tahay taageerada Ruushka ee Taliban, waxa uuna intaa ku daray “in waxa uu arkay aysan micno sameeynayn”.
Xoghayaha guud ee ee Nato Jens Stoltenberg ayaa sheegay bishii July 2017, “ma hayno caddeyn iyo warar xaqiiqo ah oo ku saabsan taageerada noocaasi ah”.
Dowladda Tajikistan ayaa dhankeeda beenisay in hubka Ruushka uu Taliban u sii maro dalkeeda, eedeeynta Gen Nicholson ayay ku tilmaameen “mid aan sal iyo raad lahayn”.
Image captionMadaxwaynaha Afqanistan Ashraf Ghani waxa uu Ruushka ku eedeeyay in ay Taliban hubaynayaan
Hasa yeeshee,wasiirkiisa gaashaandhiga ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin “kuwa been abuur ah oo aan caddeymo loo hayn”.
Afhayeen u hadlay kooxda Taliban ayaa yiri “ma jiro dal aan ka helno taageero militari “.
Image captionMarkii ay ciidamadii Soofiyeetka ka baxayeen Afqanistaan February 1989
Ruushka ayaa beeniyay in tageero militari ay siiyaan kooxda Taliban balse waxa ay qirteen “xiriir” ay la leeyihiin Taliban.
Balse xiriirka u dhaxeeya Ruushka iyo Taliban ayaa aad sare ugu kacay saddexdii sano ee ugu dambeeyay gaar ahaan intii laga asaasay Afqanistaan 2015 waxa loogu yeeray “IS Khorasan”.
Iyada oo xiriirkan laga faa’idaysanayo ayaa Taliban waxay filayeen in ay Ruushka ka helaan hub culus si dagaalka ay ugu guulaystaan, waxa ay sidoo kale rajaynayeen in ay helaan hubka lidka diyaaradaha iyo gantaalo si ay Mareykanka ula dagaalaan.